KALA DUWAN OO BARADHO AH "KOROLEVA ANNA" WAXAY KA TIMAADAA JARMALKA OO SHARAXAAD FAAHFAAHSAN OO KU SAABSAN SIFOOYINKA KALA DUWAN IYO MUUQAALADA KALA DUWAN LEH OO LAGU MUUJIYEY SAWIRRO MUUQAAL AH - BEER CAGAARAN
Cultivar iyo noocyo baradho u adkaysta cudurka "boqoradda Anna": dabeecadaha, sharaxaadda, sawir
Dhawaan dhow, Anna Koroleva kala duwan, taas oo wax soo saar iyo adkaysi u cuduro badan, ayaa la tijaabiyey oo lagu daray diiwaanka Gobolka ee Ruushka.
Marka lagu daro faa'iidooyinkaas, noocyada kala duwan ee muuqaalka dalagyada xididada, dhadhanka wanaagsan iyo kartida ay u koraan ku dhowaad ciidda oo dhan.
In this article waxaan ku sharaxi doonaa si faahfaahsan waxa loo yaqaan 'Queen Anne' ah, waa maxay waxyaallaha beerashada iyo sifooyinka kale.
Magaca dugsiga Queen Anne
Sifooyinka guud noocyo kala duwan ee dhalidda sare iyo dhadhan wanaagsan
Wakhtiga uurka 80-85 maalmood
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 80-150 g
Tirada digriiga duurka 6-16
Yield 390-460 c / ha
Tayada macaamilka dhadhanka wanaagsan, jidhku ma madoobaado, oo ku habboon shimbir
Soo kabashada 92%
Gobollada la doorbido ciid kasta oo ku habboon barandhada sii kordhaya
Cadaadiska cudurada adkaysi u ah qolof, fayraska, kansarka baradhada, si dhexdhexaad ah u adkaysta phytophthora
Noocyada sii kordhaya lagu taliyay biqilaad horudhac ah iyo beeritaanka ciid diirran
"Queen Anne" waa noocyo kala duwan oo hore u bislaaday, laga bilaabo xilliga ay soo baxaan caleemaha badankooda ilaa 80 cisho, waxaad bilaabi kartaa cunno baradho ilaa dhammaadka xilliga daaqsinka, qaangaadhka shuruuda leh wuxuu ka hor yimaadaa farsamada.
Caawin Bisaylka shuruudaha - digriiga baradho waa qiyaas ku filan, laakiin maqaarku waa dhuuban yahay, ma adkaysan karo oo ka danbeeya tuberka.
Dalagga xididku wuxuu leeyahay cufan jilicsan oo jilicsan iyo qoryaha jaalaha ah ee dhismaha adag. Indhaha on diirka yihiin yar yar, beeray, si qunyar ah, si toos ah dusha sare.
Joogitaanka indhaha dusha sare waxay sahlaysaa nadiifinta iyo sii wadida dheecaanka baradhada, baradhada noocan oo kale ah waxay ku habboon yihiin baakooyinka.
Foomka - qulqulaya, midab leh - oval. Baradhadu waxay leeyihiin sicir barar sare - in ka badan 94%.
Miisaanka - laga bilaabo 84 g ilaa 140 g., Cabbiraha - wuxuu gaaraa in ka badan 10 cm oo dherer ah. Qodobka Naadiga ah - laga bilaabo 13 illaa 15% - xuduudda u dhexeysa heerka hoose iyo sare.
Digniin! Qaddarka starch wuxuu ku xiran yahay xaaladaha cimilada - guntada kuleylka ah ee kuleylka qoyan ee digriiga waxay noqon doontaa wax ka badan roobabka.
Bacriminta waxay saameeyaan heerkulkuh, ma u ogolaan inay hoos u dhigto.
Baradhada oo leh alaabada nalalka hooseeya - ilaa 14% ku habboon cunto kariska, saladhka, baradhada karinta - lama karinin jilicsan inta lagu jiro daweynta kuleylka.
Jadwalka hoos ku qoran waxaad arki kartaa inta boqolkiiba istaarijka laga helayo noocyo kale oo baradho ah oo la barbar dhigo tan:
Kareemada kala duwan ee boqorada boqoradda Anna waxay leedahay sifooyinka kala duwan:
Kusoo baxa kicinta ama xabbad nus ah oo cabbir dhexdhexaad ah.
Caleemaha waa weyn waxayna leeyihiin qaab baraf ah oo caadi ah, qaabdhiska daboolka leh ee pubescence yar, cagaar madow oo midab leh, oo kala gooyay.
Qaar badan oo ubax ah, corolla cad cad.
Aagagga cimilada ee beerashada
Tijaabooyin guul leh oo baradho ah ayaa lagu fuliyay gobolka dhexe ee Dhexe. Boqorka Anna sababtoo ah roonaanta waxaa laga yaabaa in la koro oo dhan xuduudda ee Ruushka iyo dalalka ku dhow, iyo sidoo kale Yurub. Gobollada qoyan, waxaa loo baahan yahay waraabin wanaagsan.
Soo bixitaanka "Queen Anne" ayaa ka sarreeya heerarka gobolka dhexe ee gobolka Volga, tirada ugu badan ee 450-500 oo ka mid ah 1 hektar, iyada oo tijaabada ugu horeysa ee maalinta 45aad ka dib biqilka ku saabsan 100 sentiyood oo laga soo qaaday 1 hektar. Dhaqan ahaan ma laha baradhada yaryar markaad qoddo farsamo.
Soo-saarka noocyada kale ee isbarbardhigga waxaa lagu soo bandhigay jadwalka hoose:
Qaboojiyaha 180-380 c / ha
Svitanok Kiev ilaa 460 c / ha
Borovichok 200-250 doolar / ha
Kala duwanaantu waa mid hore, miis, loogu talagalay isticmaalka ka dib daaweynta kulaylka, oo ku habboon ku-qabsashada, maraqa iyo chips.
Caawin Noocyo baradho ah oo cagaaran ayaa caan ka ah dadka degaanka xagaaga - beerta, waxaa ku jira walxo badan oo faa'iido leh, tusaale ahaan, carotene, taas oo ah antioxidant xoog leh.
Boqorka Anne waxaa loo arkaa dhadhan fiican iyo dhadhan "baradho" hodan, sida dhammaan noocyada baradhada jaalaha ah. Baradhadu ma dhadhamaan qadhaadh, ma dhadhan dhadhan macaan. Kala sooc maaha, waxay u muuqan doontaa miis fadhiya sida saxan dhinaca ah.
Waa muhiim! Dhammaan sifooyinka faa'iidada leh ee baradhadu waxay ahaanayaan kuwo buuxa, haddii la kariyo maqaarkooda. Peel sidoo kale wuxuu leeyahay tiro badan oo nafaqo ah.
Waxaan kugula talinaynaa in aad aragto naftaada "Queen Anne" baradho - nooc sharaf leh, sharaxaadda taas oo kor ku xusan sawirka aan soo jeedino:
Dhibaatooyinka looma helin, natiijooyin ah qaabka hal cudur oo halis ah ayaa suurtogal ah. Waxay u baahan tahay waraabinta cimilada qalalan, waxay leedahay difaac dhexdhexaad ah oo qallalan.
Waxay caan ku tahay waxyaalahaas oo kale:
weyn, ku dhawaad ​​le'egba size, khudradda xididka;
indhaha dusha sare;
maadooyinka sare ee carotene;
iska caabinta maskaxda;
caabbinta sare ee cudurada waaweyn;
ma aha mid saxan oo ku saabsan nooca ciidda;
muddo dheer la keydiyay.
Kaydinta uma baahna xaalad gaar ah. Maqaalkeena waxaad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladaha kaydinta xilliga qaboobaha, waqtiga ku habboon iyo doorashada xulashada saxda ah.
Boqoradda Anne "oo lagu duubay jinsiyado ka soo jeeda Jarmalka. In Ruushka, wuxuu isku muujiyay inuu ka wanaagsan yahay dhinaca wanaagsan, oo idil dhammaan tijaabooyinka. Diiwaanka Gobolka ee Ruushka ee gobolka Woqooyiga Dhexe ayaa dhowaan ka mid ahaa, sannadka 2015.
"Queen Anne" waa noocyo hore, waxaa suurtagal ah in la bilaabo beerashada laga bilaabo Abriil, sida caadiga ah waxay bilaabaan inay beerto bartamihii May. Agrotechnics ma aha wax adag.
Heer aad u hooseeya ama heerkul aad u sarreeya ayaa si xun u saameeya biqilka barafka., for beeritaanka waa lagama maarmaan in la doorto cimilada kulul, heerkulka ciidda qoto dheer oo ku saabsan 10 cm waa in la kululeeyo ugu yaraan 10 digrii.
Baradhada hore waa in aan lagu haynin dhulka ka dib marka la fulinayo. Toddobaad ka hor intaan la beeriin, baradhadu waxay u baahan yihiin in la xalliyo (ka soo qaad jiirka la yareeyey ama khudaarta cagaaran). Boqorka Anna ayaa si fiican uga jawaabta horudhaca.
Bannaanka cagaarshow badanaa waxay ka baxaan digriiga cagaarka ah, baradhadaas aan la cuni karin sababtoo ah maadada sare ee walxaha sunta ah - hilibka lo'da, laakiin waxay kala baxaan sanadka soo socda iyo horumarin badan.
Caawin Hilibka hilibka lo'da - walax lagu sameeyay barandhiga oo joogitaanka qorraxda dheer, qadar yar, ma aha mid halis u ah jidhka, laakiin tiro badan ayaa waxyeeleynaya.
Baradhada kala duwan ee noocaan ah waxay horumarisaa digriiga badan, sidaa daraadeed masaafo badan ayaa loo baahan yahay inta u dhaxeysa dhirta, ugu yaraan 20 cm. Baradho waa in lagu beeraa jeexjeexyada ama sariiraha ku jira ciidda qoyan ee qoyan. Nooca carrada maaha mid muhiim ah, laakiin content potassium waa inuu ahaado mid sare..
Waxay si fiican u dhaqantaa marka ay dabacsan tahay, hilling, jaridda dhirta. Bacriminta Fertilizers ayaa loo baahan yahay. Ku saabsan sida iyo goorta la sameeyo iyo sida loo abuuro baradhada marka la beero, akhriya maqaallada shaybaarka ah ee boggayaga. Wixii horumarinta horumarka ee digriiga, ubax on caleemaha waa in la gooyaa.
Inta badan noocyo baradho hore u bislaaday lama kaydin muddo dheer. Boqorka Anna, oo leh heerkul caadi ah oo joogto ah, gaadiidka lagu kaydiyo si wanaagsan, xaaladda ugu weyn waa meel madow oo qalalan.
Baradkani wuxuu leeyahay boqolkiiba sagaashan oo ka soo horjeeda dabaysha goor dambe ee digriiga iyo caleemaha, nematode-cysting-ka, kansarka baradhada, dhajinta maskaxda iyo duubka caleen.
Digniin! Bataato beereedka soo socda ee yaanyada ama meelaha ay tamaandhadu koraan xilliyadii hore lama ogola - waxay leeyihiin cudurrada caadiga ah iyo cayayaanka.
Biyo miirista ka hortag ah cimilada qalalan ee ka hortagga cayayaanka ayaa loo baahan yahay.
Qof walba waa ogyahay in baradho-baradho Colorado waa cayayaan ugu weyn ee baradho iyo beerto yaanyo.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa waxyaabo waxtar leh oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah, akhri dhammaan wixii ku saabsan diyaarinta kiimikada iyo daaweynta dadka ee dadka waaweyn iyo dirxiga ubaxa.
"Queen Anne" ayaa ku guuleysatey dhammaan beeraleyda leh tiro badan oo goosashada iyo dhadhanka.
Jadwalka hoose waxaad ka heli doontaa isku xirnaanta noocyo baradho ah oo leh noocyo kala duwan oo Bisaylkiisa ah oo lagu soo bandhigay boggeena:
Xilliga bartamaha Xilliga dhexe Gaar ahaan hore
Weyn Melody Innovator
Tuscany Margarita Handsome
Yanka Alladin Haween Maraykan ah
Lilac fog Dareemo Krone
Furan Beauty Muuqaalka
Rabo Milady Elizabeth